Ukuchofoza okungaphezu kwama-20% kwekhasi lethu lasekhaya kuvela kusici esisodwa | Martech Zone
Sibhalisele i-Hotjar senza okunye ukuhlolwa kwe-heatmap ekhasini lethu lasekhaya. Yikhasi lasekhaya eliphelele elinemikhakha eminingi, izinto nolwazi. Inhloso yethu akukhona ukudida abantu - ukuhlinzeka ngekhasi elihlelekile lapho izivakashi zingathola khona noma yini eziyifunayo.
Sazi kanjani? Ngaphezu kwe-20% yakho konke ukuzibandakanya emakhasini wethu asekhaya kuvela kithi ibha yokusesha. Futhi ekubukezeni okusele kwekhasi lethu, izivakashi azivamile ukuskrola futhi zihlanganyele ngokuya phansi ekhasini lethu. Okuhlukile ukuthi izivakashi eziningi ziya ezinyaweni zethu.
Siqalisile I-Swiftype yensizakalo yethu yosesho lwangaphakathi. Inikezela ngomshini wokuqina wokuqina, ukubika okuhle, futhi sinezici eziningi zethoni esingazisebenzisa kusayithi nayo.
Kungakhathalekile ukuthi isayithi lakho libekwe kahle kanjani, indlela okuzulazula ngayo, izivakashi zifuna ukulawula okwenziwayo futhi zifuna indlela enhle yokusesha yangaphakathi ukuthola engikudingayo. Njengoba sisebenza nezinkampani ezishicilela njalo, ukuba nendlela yokusesha eqinile futhi enembile kufanele. Uma ungasebenzisi i sesha njengensizakalo ithuluzi, qiniseka ukuthi uyalisebenzisa ukulandelwa kwangaphakathi kosesho kuma-analytics akho. Ngokuhamba kwesikhathi, uzophinda uthwebule imininingwane emnandi ezihlokweni izivakashi zakho ezifuna ukuthi awukhiqizelanga okuqukethwe.
Tags: chofoza ukuhlaziywaimephu yokushisaikhasi lesikhwama sasekhayaukuhlelwa kwekhasi lasekhayahotjarusesho lwangaphakathisesha njengensizakaloSesha Marketingswiftype
Mar 19, 2016 ku-4: 50 PM
Yiqiniso. Kumklami kungcono ukukhombisa njengokukhanga okukhulu kwezixhumanisi zamakhasimende njengoba kungenzeka. Hhayi ngaso sonke isikhathi amaklayenti achofoza ingxenye ye- “best-to-company” yewebhusayithi ye-www.